प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् होला ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् होला ?
हामी धेरैले प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको सुनेका छैनाैँ होला, तर कतिपय भने यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समेत भएका पनि हुन सक्छाैँ ।यदी प्लेनमा बच्चा जन्मिएमा उक्त बच्चा कुन देशको नागरिक हुन्छन् त ? यो कुरा हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।विश्वका धेरै देशहरूमा प्लेनमा यात्रा गर्ने विभिन्न नियम बनाएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा ७ महिनाभन्दा धेरै समयकी ग’र्भवति महिलाले प्लेनमा यात्रा गर्न नपाउने नियम छ । यद्यपी महत्वपूर्ण अवस्थाका लागि यो नियम ल’चिलो छ ।